Edere site Tranquillus | Jul 11, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ihe ndi mmadu na ihe ndi mmadu choro banyere ndi mmadu di iche na ndi ozo. Ọ bụrụ na egboghị mkpa ndị a, obere oge mmepe ma ọ bụ ogologo oge nwere ike ibilite n'ime ụlọ ọrụ ahụ. N'ihi ya mkpa ịmalite usoro ịmụ ihe ma ọ bụ nyochaghachi azụ. Nwelite na Ntughari ma obu nkwalite mmụta akwụkwọ (Pro-A). Ngwaọrụ ga - enyere gị aka ịkwalite ọrụ gị. Ọ dịịrị gị ime mgbalị igosipụta njikere ị dị inye ọzụzụ. Onwe enwere obere ohere ka ị gha ihu gi.
Ghọta nlọghachi azụ ma ọ bụ nkwalite site na usoro ọzọ
Ọ bụ ụzọ iji kwalite njikọ ọ bụla na-adịghị ike ma ọ bụ nọrọ n'ọnọdụ ndị bụ isi na usoro mmepe azụmaahịa. N’aka ozo, ahia obula gha aghaghi agbanwe onwe ya iji mezuo otutu choro nke teknụzụ, ahia na ndi n’ere ahia choro.
Thereforelọ ọrụ ọ bụla nwere mmasị ịkwadebe ndị ọrụ ya maka ebumnuche a.
Mwepụta ma ọ bụ ịkwalite ọmụmụ ihe ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ ọ bụla aka ịmegharị akụkụ mmepụta ya ka ọ bụrụ ihe ịma aka ọ bụla. N'otu aka, Pro-A bụ ngwá ọrụ bara uru nye onye ọchụnta ego na-achọ inweta ọhụụ.
N’aka nke ozo, o na achi achi oru ndi n’aru ndi oru uru ya. Ọ na - eme ka mmadụ nwee ike ịbanye ọrụ ọhụrụ na ebumnuche maka ọrụ ngbanwe ọkachamara. Ndị na-eme ọrụ ga-ahụ ebe ahụ nrụgharị ọrụ bara uru maka ọrụ ha na ọdịnihu ọkachamara ha.
N'ụzọ dị otú a, ozugbo ọzụzụ ma ọ bụ usoro ntụgharị gasị gụchara, ndị ọrụ na-enweta nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ nke ọkachamara. Ebumnuche kachasị wee nweta: ịga nke ọma na mmepe mmepe n'ime ụlọ ọrụ yana ịbawanye mmepụta ya ogologo oge.
Profaịlụ ọkachamara dị a haveaa nwere ohere ịkwalite mmụta-ọrụ?
Onye oru a ga-enwerịrị n'okpuru nkwekọrịta CDI. Dabere na edemede L. 5134-19 na ịgbaso Usoro Ọrụ, ndị debanyere otu nkwekọrịta mwekota ma ọ bụ CUI nwekwara ike ịgbaso ọzụzụ a. Onye oru nke choro ka akwalite ya n'okpuru Pro-A. Ga-enwerịrị akara mmụta dị ala karịa nzere bachelọ.
Onye ọrụ nke na-eme obere ọrụ ya na-eso na ikike nchịkwa ahụ nwere ike gwa onye ọzọ ka ọ ga-achọ irube aka. Onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka ọrụ n'okpuru nkwekọrịta CDD nwekwara ike iru eru maka nkwalite a. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị a bụ ndị ọrụ nwere iru eru n'okpuru ọkọlọtọ nke mmepe teknụzụ chọrọ.
Ya mere, ndị isi ụlọ ọrụ ga-enye ha ohere site na Pro-A. Mgbakwunye mgbanwe ndị a na-eme n’ime ụlọ ọrụ ahụ. Na ngwụsị nke usoro ọzụzụ ahụ, ha ga-enweta ọkwa tozuru oke karịa. Nke a ga - enyere ha aka ịnweta nkwalite ma ọ bụ ọfụma karịa.
Kedu ụdị ọzụzụ n'oge Pro-A?
Ndị ọrụ a họpụtara maka ọzụzụ a ga-agbaso usoro ọkachamara na teknụzụ na usoro ha ga-etinye n'ọrụ ma emechaa. Dabere na asambodo achọrọ, a ga-eme ọzụzụ ga-anọ n'okpuru ọnọdụ ndị bara uru. N'ihi ya, ụmụ akwụkwọ nọ n'ime usoro nke Pro-A nwere ike ịnweta nhazi ọkwa nke nkwekọrịta mkpokọta nke ngalaba chọrọ.
Ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ a na-eji ohere ọmụmụ na ohere ndị ọzọ iji aka wepụta onwe ha maka ọrụ aka ma ọ bụ ọrụ akọwapụtara. Na ngwụsị nke ọzụzụ Pro-A, ha ga-erite uru na Nkwado nke ahụmịhe enwetara (VAE). A ga-edebanye aha ha na RNCP (Ntuziaka nke Mba Asambodo Ndị Ọkachamara).
GỤỌ Atụmatụ mmepe dị ka aka ga-esi dị.
N'ezie, ebe ọ bụ na August 23, 2019 mgbe etinyere iwu n ° 2019-861, mmadụ nwere ike irite uru site na ntozu ọkachamara site na Pro-A. Nke a bụ iru eru nke dị na ndepụta doro anya nke ngalaba ọkachamara. Enwere ike ịmepụta Pro-A n'ihi ịdị adị nke usoro eji arụ ọrụ na mgbanwe dị ukwuu na ngalaba ọ bụla ọkachamara.
Kedụ ka ọzụzụ si arụ ọrụ na-ewere ọnọdụ?
Enwere ike ịme ọzụzụ n'oge ọrụ. A na-akwụ onye ọrụ ahụ ụgwọ kwa ọnwa. Onye ọrụ nwere ahụmahụ karị, nke onye njikwa azụmaahịa họpụtara, na-arụ ọrụ nke onye nkuzi ma yabụ na-enye ọzụzụ ọmụmụ ọrụ iji mee nke a. Nkuzi, n'ime usoro nke Pro-A, na-adị n'etiti ọnwa 6 na ọnwa iri na abụọ (ma ọ bụ oge elekere 12 kacha nta).
Onye nduzi ga-anabata ma duzie onye ọrụ ahụ mgbe ọ na-azụ ma ọ bụ zụọ ya. Ọ dị n’aka onye nduzi a ịhazi oge ya na ihe omume ya iji kụziere usoro niile achọrọ. Otu onye nkuzi a ga-esonye na usoro ikpeazu nke usoro nkuzi: nyocha ya.
Pro-A nwere ike ime na mpụga oge ọrụ. Onweghị onye ga-enweta nkwado ọzụzụ na nke a. Oge ọrụ nwere ike ịbụ kpam kpam ma ọ bụ nke oge ụfọdụ maka oge ọzụzụ. Onye were ya n'ọrụ na onye ọrụ ahụ metụtara ga-ekpebi mgbe edechara nkwekọrịta ahụ site na nlekọta onye na-arụ ọrụ.
N'oge a, nkwekọrịta ọrụ onye ọrụ ga-agụnye ndozigharị. Agbanyeghị, ọ na-aga n'ihu na-enweta uru niile jikọrọ ya na Social Security ma ọ bụ ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ nkwado mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịnwe nkwụghachi na nkwado ma ọ bụrụ na ọrịa adịghị.
Ebee ka ego si enweta Pro-A sitere?
Trainingnweta nkuzi-omumu putara ikwenye oru ndi enyere aka. Achọghị ndị ọrụ nwere ọzụzụ ga - ejikọ aka na ọrụ ha ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla. Ọ bụ kama Onye na-arụ ọrụ ikike asọmpi (OPCO) ma ọ bụ ụlọ ọrụ (enyere gị maka ọrụ ọzụzụ) nke na-akwado ihe niile.
Nke a bụ ọnụego ewepụghị nke na-ekpuchi ụgwọ nke ọzụzụ, nnabata na njem maka onye ọrụ na-amụ ọrụ. Ọnụ ego dị larịị nke ajụjụ bụ euro 9,15 kwa awa site na ndabara dị ka iwu ahụ si dị. Agbanyeghị, ngalaba na-ahụ maka ọzụzụ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ka mma.
Enwere ike kwenye ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ ọzụzụ site na ikike Asambodo ma ọ bụrụ na ngalaba na-ebido ọrụ ahụ haziri ya tupu oge eruo. Onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịkwụ ụgwọ maka ọrụ niile nke onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ.
Ọ nwere ike were ọnụego metụtara mmega nke nkuzi nkuzi oge niile n’ime usoro nke Pro-A. Ọ bụ akụkụ nke ego ewepụtara maka ọzụzụ Pro-A nke a na-achịkwa na njikwa nke ụlọ ọrụ na-emekọ ihe ọnụ nke na-eme ka o kwe omume ịkwụghachi ndị ọrụ ọzọ a na ndị nkuzi a họpụtara ka ha wee weghachi ma ọ bụ Pro-A. Nke a bụ ohere na-agaghị echefu.
Mmelite na Ntughachi ma ọ bụ nkwalite ọrụ ịmụ ihe (Pro-A). July 8th, 2020Tranquillus
gara agaAtụmatụ mmepe dị ka aka ga-esi dị.
-esonụAkaụntụ Ọzụzụ nkeonwe (CPF)